NLD ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းထိန် တာဝန်မှ ရပ်နားခွင့် တောင်းဆိုမှု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင?? - Yangon Media Group
NLD ပါတီ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းထိန်၏ တာဝန်မှရပ်နားခွင့်ပြုရန် ပေးပို့စာ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့မှသာ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အပါအဝင် ကျန်တာဝန်ရှိသူတို့၏ သဘောထားများစောင့်ဆိုင်းနေဟု NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က မတ် ၁၆ ရက် တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ပါတီ၏ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်သည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်းကသား ဖြစ်သူ မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် သုံးပတ်လောက်က ပါတီတာဝန်များ ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့သဖြင့် ပါတီမှရပ်နားခွင့်ပြုရန်စာကို ပေးပို့လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယင်းပေးပို့စာကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အပါအဝင် ကျန်သက်ဆိုင်သူများကို တင်ပြထားကာ သဘောထားများ တောင်းခံထားကြောင်း သိရသည်။
”ဒီစာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးရဲ့ သဘောထားတွေကျလာတော့မှပဲ ကျွန်တော်တို့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကပဲ ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စာကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အနေနဲ့လည်း ဆုံးဖြတ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဆီကိုတော့ တင်ပြထားသလို ကျွန်တော်တို့က သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကို တော့တင်ပြပြီး သဘောထားတွေ တောင်းထားတယ်”ဟု ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောသည်။ ပါတီတာဝန်များမှ ရပ်နားခွင့် ပြုရန်ပေးပို့လာသည့် ဦးဝင်းထိန်၏ အကြောင်းကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာအကြောင်းကြားလာခြင်း မရှိသေး ကြောင်း၊ သို့သော် မတ် ၂၄ ရက်တွင် ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးရှိ ကြောင်း သိရသည်။
”လာမယ့်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆုံး ဖြတ်ဖြစ်သွားမလားဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့သူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေပြည့်စုံရင်တော့ ကျွန် တော်တို့ တစ်ခုခုတော့ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့။ အကယ်၍ မေးမြန်းထားတာတွေမပြည့်စုံရင်တော့ ထပ်စောင့် ရမှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အလောတကြီးလုပ်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး” ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ NLD ၏ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ အသက် (၇၇) နှစ်အရွယ် ဦးဝင်းထိန်မှာ ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလက သားဖြစ်သူမင်္ဂလာဆောင်အ ပြီးတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တပ်မတော် ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဦးဝင်းထိန်သည် ၁၉၈၈ တွင် NLD ပါတီစတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၂ ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲတွင် မိတ္ထီလာမြို့နယ်၌ ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံခဲ့ရပြီး ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင်မူ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ သီချင်းကို ပြန်လည် သီဆိုမယ့် BoA
မင်းဘူးမြို့ မင်းလှကျင်းကျေးရွာမှ ပြည်သူများ မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားသို့ နွားလှည်းများဖြင့် ?
Wisdom Hill ကျောင်း၌ဖြစ်ပွားခဲ့သော မူကြိုကျောင်းသူတစ်ဦး လိင်အကြမ်းဖက်ခံရသည့်ဖြစ်စဉ်အား တရားမျှတမှု ရှိစေရေးအတွက် မန္တလေးမြို့နှင့် စစ်ကိုင်းမြို့တို့တွင် ပြည်သူထောင်နှင့်ချီ ဆန္ဒထုတ်ဖော်